PMC waxay u magacowday Istuudiyaha Vintage Studios sidii ay u Qaybiyeen Tayada Thai ee Dhamaan Proitors Monitors | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE
Home » News » PMC waxay u magacaawday Istuudiyaha Vintage Studios sidii ay u Qaybiyeen Taayiriyaasheeda Thai Dhamaanba Ilaaliyayaasha Audio Audio
PMC waxay u magacaawday Istuudiyaha Vintage Studios sidii ay u Qaybiyeen Taayiriyaasheeda Thai Dhamaanba Ilaaliyayaasha Audio Audio
Hadalka PMC wuxuu ku faraxsan yahay inuu shaaciyo in Vintage Studios loo magacaabay inuu noqdo qaybiyaha rasmiga ah ee Thailand, iyada oo mas'uul ka ah shirkadda oo dhan alaabooyinka kormeerka xirfadeed.
Waxay ku yaalliin degmada Bang Na ee Bangkok, Vintage Studios waxaa laga aasaasay 2002 qoyska Puengrusme sida duubista muusikada ganacsiga, isku-dhafka iyo xarunta Mastering. Jacaylka qoyska Puengrusme ee muusikada iyo dareenka si faahfaahsan ayaa loo xaqiijiyey mustaqbal xoog leh oo loogu talagalay Vintage Studios iyo sumcadda gudbinta natiijooyin tayo sare leh.
Istaatistikada 2016 Vintage Studios ayaa ku dardartay xarig cusub qaansada iyada oo loo sii marayo qaybinta alaabada Alaabada Caadiga ah ee adag. Waxay hadda u qaybisaa noocyo maqal oo maqal ah oo heer sare ah oo ay ku jiraan Furman, Bock Audio iyo Soundelux. Intaa waxaa u dheer, waxay ku fidday dhinaca waxbarashada waxayna socodsiisaa bandhigyo, koorsooyin tababar iyo barnaamijyo ku tababarasho jaamacadeed oo ka kooban saddex-istuudiyadeed iyadoo lala kaashanayo soosaarayaasha iyo machadyada waxbarashada Thai.
Go'aanka ah in lala galo heshiis qaybinta PMC wuxuu ahaa mid sahlan oo loogu talagalay Studiyaha Vintage Studios. Xaruntu waxay leedahay kormeerayaal PMC dhammaan seddexda qol ee kontaroolada - MB3 XBD-A iyo labotwo6 kormeerayaal qolkeeda weyn, twotwo8 waxay kormeeraysaa istuudiyadeeda labaad iyo isugeynta dhow ee natiijooyinka ka dhaceysa natiijooyinka xirmooyinka6 kormeeraha istuudiyaha saddex.
Milkiilaha aasaasaha Vintage Studios iyo aasaasaha Sudatip Puengrusme wuxuu leeyahay: “PMC waa astaan ​​cajiib ah oo leh dhaxal weyn. Codadka kormeerayaashiisu waa isbarbar socda iyaga oo uga mahadcelinaya tikniyoolajiyadda Kala-gudbinta Sare ee Gaarka u ah waxaan kulligeenna ku faraxsannahay inaan awood u yeelan karno inaan keeno heerkan tayada leh suuqa Thai markii ugu horreysay. Qof kasta oo ka maqlay PMC-yada istuudiyadeenna si cajiib ah ayey u tahay.
Sudatip Puengrusme wuxuu intaa ku daray in moodooyinka PMC ee qol kasta loo xushay inay ku habboonaan karaan acoustics-ka iyo cabirka boos walba iyo waliba awooddooda ay ku gaarsiin karaan natiijooyin aad u wanaagsan marka macaamiisha ay duubanayaan, isku darayaan ama garaacayaan.
Waxaan sidoo kale u isticmaalnaa ujeedo mudaaharaad sababta oo ah astaanta ayaa wali ku cusub suuqa Thai, ayuu yidhi. Si kastaba ha noqotee, waxaan soo marnay xilli hordhac ah oo aad u wanaagsan oo dadka Thailand waxay durba bilaabeen inay iibsadaan PMC. Bishii la soo dhaafay, markii khabiirka wax soo saarka ee PMC Chris Allen uu halkaan joogo, waxaan casuumay soosaarayaasha maxalliga ah iyo kuwa muusigleyda ah inay ka soo qeyb galaan kulan dhageysiga qof walbana wuxuu aad ugu qancay kormeerayaasha. Shaqaalaheenu sidoo kale aad bay ugu faraxsan yihiin iyaga.
PMC's Chris Allen wuxuu raaciyay: “La shaqeynta Studios-ka Vintage Studios waa waayo-aragnimo aad u kala duwan maxaa yeelay iyagu waxay ugu horreeyaan xarun duubitaan ganacsi waxayna xiriir dhow la leeyihiin qaar badan oo ka mid ah cayaartoyda muusikada Thai. Annaga ahaan, tani waa faa iido weyn maadaama aan ku saxnay bilowga aasaaska PMC inay astaan ​​u tahay Thailand. Waxaan kalsooni ku qabnaa in markii dadku maqlaan sida weyn ee kormeerayaashayadu u dhawaaqaan, ay rabaan inay iibsadaan - isla markaana lahaadaan shirkad sida Vintage Studios oo safiir noo ah ayaa muhiim u ah guusha mustaqbalkeena. Waxa intaa u dheer inay si firfircoon uga shaqeeyaan waaxda waxbarashada, oo sidoo kale la jaan qaadaya qaabkeenna taageerista fannaaniinta iyo soosaarayaasha bilowga shaqadooda.
Studiyaha Vintage Studios wuxuu horey u qaatay amar ah lammaane PMC IB1S-A kormeerayaal xarun ganacsi oo kale iyo lammaane IB2 XBD-A, oo lagu rakibi doono istuudiyaha gaarka loo leeyahay. Macaamiisha Thai ee raba inay khibrad u yeeshaan dhawaaqa kormeerayaasha IB2 XBD waxay awoodi doonaan inay booqdaan istuudiyaha maadaama milkiilaha uu ku faraxsan yahay in loo isticmaalo xarun demo oo dheeri ah.
Caaqilada Cobalt Qaybiyaha MB2 XBD-A Guddoomiye ku PMC natiijada6 Thailand twotwo6 twotwo8 Istuudiyaha Fudud	2019-11-08
Previous: NewTek TriCaster® Mini wuxuu keenay UHD Digital Production Media and Streaming Iskuullada, Ganacsiyada, iyo Xirfadlayaasha AV
Next: NUGEN Waxay Soo Bandhigeysaa Barnaamijyo La Siiyey Oo La Sii Daayay Oo Ku Saabsan Barnaamijyada Fanka Iyo Telefishanka